Vaovaon'ny orinasa |
Tsy azo apetraka ao amin'ny efi-trano misy haavo ambany haavo ve ny hazavana miasa amin'ny valindrihana?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-10
Nandritra ny taona maro nisian'ny varotra sy ny vokatra famokarana, hitanay fa very be ny mpanjifa sasany rehefa mividy hazavana miasa. Ho an'ny jiro miasa amin'ny valindrihana dia 2.9 metatra ny haavon'ny fametrahana azy. Saingy any Japon, Thailand, Ekoatera, na sasany ...
Didim-panamboarana Belated amin'ny jiro miasa
Rehefa milaza ny mpanjifa vahiny fa tsy mbola nividy ny jiro fiasanao aho, azo itokisana ve ny kalitaony? Na lavitra anao loatra aho. Inona no tokony hataoko raha misy olana amin'ny kalitao? Ny varotra rehetra, amin'izao fotoana izao, dia hilaza aminao fa ny vokatray no tsara indrindra. Fa tena mino azy ireo ve ianao? Amin'ny maha profo ...
Fanatsarana ny vokatra ny sandry lava
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-09
Vokatra iray, amin'ny alàlan'ny fanavaozana tsy tapaka fotsiny ihany, no ahafahan'ny mpanjifa miaina traikefa mpampiasa tsara kokoa. Araka ny fanamarihan'ny mpampiasa sy ny fampidirana ireo teknolojia vaovao, dia nohavaozinay ny sandriny nitarina (sandry mihodina na sandry marindrano) an'ny hazavan'ny valindrihana. ...